Kachasị 5 Kachasị ndị mepụtara GIF - LucidPix
N'oge na-adịbeghị anya GIF anọwo na-alaghachi na ewu ewu, na ewu ewu a, ị ga-achọ ezigbo ngwaọrụ iji mepụta ha. Ma ị na-achọ ihe ncheta ma ọ bụ naanị iji foto na-eme ihe ọchị, ịme GIF abụghị ihe ịma aka. Anyị na-akụri ihe ndị anyị họpụtara maka ise kachasị mma maka ndị na-emepụta GIF iji nyere gị aka ịhapụ njigide ma mee ka GIF kachasị mma.
Onye kere GIF Free
Onye kere GIF Free na-enye ike dị mkpa achọrọ na onye na-eme GIF. Ọ na-enye gị ike ịtụgharị foto ma ọ bụ vidiyo ka ọ bụrụ GIF, yana ọtụtụ nhọrọ iji tọghata. Mgbe imusiri iji ngwa ahụ, nke anyị chọpụtara na ọ bụ ihe ịma aka, ị nwere ike iji ya maka okike eke GIF. O nwekwara ike ịtụgharị akụkụ nke vidiyo YouTube ka ọ bụrụ GIF, nke nwere ike ịba uru. N'ozuzu, ọ nwere ihe ndabere ịchọrọ, ọ naghị adịkarị mgbagwoju anya, yana nwee ngwaọrụ dị mfe iji nyere gị aka ịmepụta GIF ga-amasị gị.
LucidPix bụ ngwa maka ama ọ bụla na-enye ndị ọrụ ike ịmepụta, dezie ma kesaa ụwa dịka ha na-ahụ ya, ya na foto 3D. O nwekwara ikike ime ka ngwa-ngwa, mfe, na ịtụnanya anya animated GIF.
Na LucidPix, enwere nhọrọ ị nwere ike ịhọrọ ime ihe onyonyo ọ bụla ị họọrọ n’ime ihe ngosi GIF. Otu mgbata ahụ na-enye gị ohere ịkekọrịta GIF ahụ n'etiti mmadụ ọ bụla site na ngwa ozi, email, wdg, ma ọ bụ na nyiwe mgbasa ozi ọ bụla.
Usoro ihe okike GIF dị mfe ma na-arụpụta ihe osise na-agagharị agagharị. N'ikike iji mepụta GIF dị ịtụnanya na nhọrọ ị weghara ya ma mee foto 3D n'ime GIF animated, ngwa a bụ nnukwu mgbakwunye na ama gị.
Ndị ọrụ nwere ike hazie ihe ha 3D GIF na nzacha VCSO-like 3D, Frames XNUMXD, na ederede 3D ederede. Ọzọkwa, mgbe ị na-ebuga na GIF ị nwere ike ịhọrọ nke a Speedgba ọsọ 3D na ụdị iji kacha mma dakọtara foto gị.
Ihe mmebe dị mfe e kere eke GIF na LucidPix
EZGIF na-enye ikike iji kee ihe na ezigbo nhọrọ GIF nhọrọ. Enwere ikike dị ukwuu maka weebụsaịtị dịka ha nwere ngwaọrụ kachasị ukwuu na onye ọ bụla GIF mepụtara. Echeghị m na mmadụ ọ bụla ejirila ngwá ọrụ ya dịka EZGIF na ha nwere ntọala siri ike iji wuo. Anyị achọpụtara ụfọdụ okwu arụmọrụ na nhọrọ ndị dị elu, mana ngwa ọrụ niile bụ isi na-arụ ọrụ dị ka amara. E nwere ihe nchọpụta nsogbu, yabụ o doro anya na ngwa a bụ ọrụ ọganiru. Anyị na-atụ anya ịnọgidesi ike karịa ka ngwa a na-etolite ma ha na-ejizi ngwaọrụ ha idozi ụfọdụ nsogbu.
Image Fighter Meme Generator
Ihe nkiri siri ezigbo ike, site na ahụmịhe onye ọrụ na-agbanwe agbanwe yana ọtụtụ usoro GIF mere. Ha ewerela nnwere onwe nke ịkọwapụta layouts kachasị maka GIF, yabụ ngwa ahụ dị mfe iji. Weebụsaịtị ahụ tinyekwara onyonyo a na-ahụkarị maka memes na GIF. Nke a na - ejide gị ọtụtụ ike iji banye n'ime na-enweghị itinye nnukwu mbọ ma ọ bụ iche echiche, mgbe ị na - enwe ike na ogo nke GIF gị. Ihe nlere bu onyonyo a n’onyinye onyinye, mana anyi achoghi ihe nlere ma obu uzo ndi ozo kwesiri ntukwasi obi banyere webusaiti. Ọ bụ ezigbo ngwa ma ọ bụrụ na ị na-achọ imebe simplistic na obere nkọwa nke ịchọrọ ịgbakwunye na GIF gị.
Ndị editọ Foto Ntaneti
Ndị editọ Foto Ntaneti nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndozi onyonyo na-arụ ọrụ nke ọma. Weebụsaịtị ahụ nwekwara ọmarịcha ọrụ njirimara, na-eme ka ọ dị ngwa na enweghi mgbu ịmụ. Ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị ka ha kwesiri iji obere mbọ ọ bụla. Ọ dị mfe iji ya dị oke egwu ngwa ngwa ịchọpụta yana ike ngwaọrụ ha niile. Ha na-adịghị a aụ otu ebe mgbe ọ na-abịa ha ederede na ngwaọrụ edezi ngwaọrụ. Ha na-enye gị nhọrọ ịme mgbanwe dị mfe na foto gị ma ọ bụ vidiyo gị, yana mmetụta dị elu na ihe ngosi, na-enye ha nnukwu arụmọrụ n'ozuzu dị ka onye mepụtara GIF.
Ihe 4 To Ga-eburu n’uche Mgbe Fashion Na-eme Ihe Ejiji Ejiji →← Akụkọ ndụ nke Smith Smith